FANENDAHANA MOTO : Ravan’ny Fip ireo andian-jiolahy ao amin’ny “Bande des 12”
Miezaka manao ho tsy refesi-mandidy ny jiolahy ao Toamasina. Tsy eken’ny mpitandro filaminana mihitsy anefa izany. 3 février 2019
Miezaka isan’andro izy ireo hamerenana ny filaminana ao an-drenivohitr’i Betsimi-saraka. Araka ny fanazavana nentin’ny Kaomandin’ny Fip Toamasina, dia naharay fitarinana maro dia maro avy tamin’ny mponina eny amin’ny faritra Barikadimy ka hatrany Tanandava izy ireo fa misy andian-jiolahy mitondra anarana “Bande des douze” mampihoro-horo fatratra. Fanendahana, halatra moto, harom-paosy, vaky trano, fandrahonana ho faty dia samy ataon’ireo andian-jiolahy ireto avokoa. Ny lehibeny izay antsoina hoe Rajakoba Daniel fantatry ny mponina eny an-toerana amin’ny anarana hoe Western.
Ny alin’ny sabotsy 2 febroary hifoha ny alahady 3 febroary, dia nisy hetsika manokana nataon’ny Fip. Teo am-panaovana asa ratsy no nifanenjehana ny “Bande des 12” izay tarihin’i Daniel Rajakoba.
Tonga hatrany an-tanimbary eny amin’ny faritra Tanandava iny ny fanenjehana. Nanomboka tamin’ ny 1 ora maraina hatramin’ny 6 ora maraina ny fanenjehana. Valo tamin’ ireo ekipan’ny bande des 12 no voasambotra : Ginot na i Dida, Rivaldo na i Valdo, Joel na Miry, Zo na Popo, Raissa na Resa, Justin na Dada, Gilbert na Dadakely ary i Daniel na Western. Mbola sarona tamin’izy ireo ny antsy lavalela iray, basy poleta kilalao ary moto halatra miisa roa.
Misy ny antso avo ataon’ny Kaomandin’ny Fip Toamasina, kaomisera Rafaliarivo Jules ho an’izay very moto mba ho tonga hanamarina ireo moto halatra ireo ao amin’ny biraon’ny Fip Ankirihiry. Mitondrà taratasy fanamarinana. Manao antso avo amin’ireo olona mety voaendaka teny amin’ny faritra Barikadimy, Tanandava, Tsaraho-nenana, Tsarakofafa, Mangarivotra, ihany koa ny tenany mba hametraka fitoriana. Ireo faritra ireo mantsy no tena anaovan’ny bande des 12 asa ratsy. Raha ampy ny vesatra ataontsika vahoaka dia manampy ny fitsarana isika amin’ny fanomezana sazy sahaza ho azy ireo, hoy hatrany ny Kaomisera Rafaliarivo Jules.
Raha izao vokatra izao, dia azo ambara fa ny tambazotran’ny halatra moto ao Toamasina sy Toamasina II mihitsy no rava. Tonga hatrany Toamasina an-tampon-tanàna mantsy ny “bande des 12” amin’ny halatra moto ataony. Moto marika RS no tena lasibatra amin’izany.